Posted by Tranquillus | Jan 23, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Xirfadaha xirfadeed, heerka ugu hooseeya ee higaada ayaa loo baahan yahay. Luqadda qaabka SMS-ka way ka fog tahay in la aqbalo xitaa inta udhaxeysa asxaabta iyo gaar ahaan feylasha xasaasiga ah. Sidaas darteed waa muhiim inaad ku dadaasho qoraalkaaga. Haddii aadan rabin inaad ku dhacdo dhibtaada caajisnimada. Way ku adag tahay qof, kuugga, macaamiisha, inay si dhab ah kuu qaadaan. Haddii emaylladaada si nidaamsan khaladaad uga buuxsamaan oo si xanuun leh u gaaraan heerka CM2.
Sidee loo hagaajiyaa heerka higaadaada?
Si loo hagaajiyo heerka higgaaddaada iyadoo ujeedadu tahay qalad eber ah. Habab dhowr ah ayaa suurtagal ah oo dabcan waxay kuxiran yihiin waqtiga aad diyaar u tahay inaad u hurto. Qaarkood waxay iibsadaan Beshrelle oo jimicsiga ay ugu jecel yihiin waa hadal, sida Bernard PIVOT. Haddii, inkasta oo aad rabto inaad hanato higgaadintaada, uma maleynaysid inaad sidaan oo kale u buuxin kartid galdaloolooyinkaaga. Isku day codsi sida Mashruuca Voltaire, Dhaqdhaqaaqa jirka, Orthofolie. Tani waa hab aad u xiiso badan oo lagu fududeeyo waxbarashadaada.
Tilmaamo qaar ka mid ah raadraaca khaladaadka higaada.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo haddii aad rabto inaad si weyn u yareyso tirada khaladaadka higgaaddaada. Waxaa si nidaamsan dib loogu akhrinayaa qoraaladaada iyadoo la adeegsanayo hubiyaha higaada. Dhanka kale, ha ilaawin inay yihiin aalado iyo inay yihiin kuwo aan 100% lagu kalsoonaan karin.
Xitaa akhristayaasha lacagta la siiyay sida Cordial pro ama Antidote way seegi karaan heshiisyada ama naxwaha naxwaha. Laakiin wax diidaya ma jiraan inay kaa caawin doonaan si weyn si aad u ogaatid far-ku-qoridda, okay, jamac. Adeegsiga dumarka ama adeegsiga waxyaalo khaldan. Sidoo kale waa habka ugu wanaagsan ee loo qoro eray walba si sax ah.
READ Sidee loo hagaajiyaa heerka qoraalkaaga shaqada?
Qoraal ku dhowaad aan laga soo waaqsan karin.
Inta badan dadka aqrin doona emaylladaada, warbixintaada ama waraaqahaaga. Khasab maahan inay noqdaan khabiiro awood u leh inay ogaadaan qaladka higgaadinta ugu yar. Sidaa darteed ka hor intaadan bilaabin barashada qaddarinta ee dejinta xeerarka la yaqaan ee higaadda iyo naxwaha Faransiiska. Diirada saar khaladaadka yar yar ee maalin walba la sameeyo. Khaladka la hubo inuu kusoo celin doono sawir xun oo adiga kugu saabsan. Qof aan dib u akhrin oo aan waqti u helin inuu barto qorista si kastaba ha noqotee. Dabcan hadaan dhab lagaaga dhigin waxay saameyn ku yeelan kartaa xirfadaada.
Hagaaji heerka hingaadda iyo ku-hadalka af Faransiiska
Xaaladaha xirfad ahaaneed, higgaadintu waa hanti lama huraan ah. Si kastaba ha noqotee, dib-u-helidda xeerarka higgaadda waa in la dhammaystiro. Adeegsiga ereyada iyo cod ku habboon duruufaha oo dhan ma aha in la dayaco. Dhismaha jumladaha, oo kufiican xaga higaada iyo isku xidhka. Laakiin meeshii rasmi ahaan loo adeegsan jiray, meeshii rasmiga ahayd in lagu isticmaalo. Sidoo kale waxay noqoneysaa jahwareer taas oo awood u leh inay waxyeello kuu geysato. Wadada loo maro qorista wax ku oolka ah iyo iin la'aanta ma sahlana. Laakiin haddii aad qaadatid, waxay ku gaarsiin doontaa meelo aad u sarreeya.
Waa kuwan fiidiyowyo gaagaaban oo kaa caawin doona inaad maanta bilowdo. Ka dib markaan ku daawado xawaarahaaga, waxaan kuu ballan qaadayaa inaad wax badan ka fiicnaan lahayd, heerka higaadda.
"-Elyt" ama "-usocod"?
"Ma kula hadlayaa" ama "adigu waad hadlaysaa"? - Mashruuca Voltaire
"Ma tidhaahdaa" mise "waxaad leedahay"?
"Jidka" ama "codka"?
"Arag" ama "arag"?
"Labaatan" ama "labaatan"?
"Tag" ama "tag"?
"Tayo" ama "tayo"? "Saaxiibtinimo" ama "saaxiibtinimo"?
"A" ama "a" nooc ka mid ah?
"Shixnad" ama "shixnad"?
"Wareeg" ama "wareejin"?
"Adigu waad kala soocdaa" ama "waad kala soocdaa"?
"Miyaad wax cuntaa" mise "waad cuntaa"? "Waad cuni doontaa" ama "waad cuni doontaa"?
Ku hagaaji heerka higgaaddaada fiidiyoow 5-Maarso, 2021Tranquillus
horePACA> Tababar maqal iyo madal qoraal cusub
socdaNaas nuujinta: waa maxay waajibaadkayagu?